MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar, Israel sign Mutual Visa Exemption
The Republic of the Union of Myanmar and the State of Israel, desirous of enhancing and further developing the friendly bilateral relations existing between the two countries, H.E. U Kyaw Zeya, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and H.E Mr. Daniel Zohar Zonshine, Ambassador of the State of Israel to the Republic of the Union of Myanmar signed the Mutual Visa Exemption Agreement for Diplomatic and Service/ Official Passport Holders, each in English , Myanmar and Hebrew languages on the 12th June 2017 at Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw, regarding with duration of stay not exceeding 90 days. The mutual visa exemption agreement will facilitate travel procedure for the holders of diplomatic and service/ official passports of the two countries.
Dated, 12 June 2017
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား သံတမန်နှင့် အထူး/ ဝန်ထမ်းနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံအစိုးရတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ၏ ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန် ဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ နှစ်နိုင်ငံ၏ သံတမန်နှင့် အထူး/ဝန်ထမ်းနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် သဘောတူစာချုပ်ကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ဟီဘရူး (၃) ဘာသာဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းသဘောတူစာချုပ်အရ နှစ်နိုင်ငံ၏ သံတမန်နှင့် အထူး/ဝန်ထမ်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ရက်(၉၀) ထက် မကျော်လွန်သည့် နေထိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်နှင့် အထူး/ဝန်ထမ်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအကြား ခရီးသွားလာရေးကိုလည်း အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်